ကိုလံဘီယာ နယ်စပ်မှ ကူညီထောက်ပံ့ရေး အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးသယ်ယူသူများကို ဗင်နီဇွဲလားလုံခြ? - Yangon Media Group
ကိုလံဘီယာ နယ်စပ်မှ ကူညီထောက်ပံ့ရေး အစားအသောက်နှင့် ဆေးဝါးသယ်ယူသူများကို ဗင်နီဇွဲလားလုံခြ?
ကူကတ္တာ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄
ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံအတွက် အ မေရိကန်ကပေးပို့သော လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ အကူအညီများအား ကိုလံဘီယာနှင့် ဘရာဇီးနယ်စပ်များမှ တစ်ဆင့်ဗင် နီဇွဲလားနိုင်ငံတွင်းသို့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက်က သွင်းယူလာရာတွင် သမ္မတမာဒူရို၏ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက တားဆီးပိတ်ပင်ခဲ့ပြီး လူစုလူဝေးများအား မျက်ရည်ယိုဗုံးများ၊ ရော်ဘာကျည်များဖြင့် ပစ်ခတ်လူစု ခွဲခဲ့ရာ လူနှစ်ဦးသေဆုံးပြီး လူ ၃ဝဝ ကျော် ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့သည်ဟု ဖေ ဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက် သတင်းများအရ သိရသည်။
အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဂွာအီဒိုက မပစ်ခတ်ကြရန်နှင့် အာဏာရှင်မာဒူရို၏ အမိန့်အား မနာခံဘဲ ဗင်နီဇွဲလားပြည်သူများနှင့် အတူပူးပေါင်းရန် ပြောခဲ့သော်လည်း လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ကိုလံဘီယာ နယ်စပ်တံတားနှစ်စင်းမှ ပိတ်၍ ပစ်ခတ်လူစုခွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ထောက်ပံ့ကူညီရေး ပစ္စည်းများကို ဂွာအီဒိုကကြီးကြပ်ပြီး ကိုလံ ဘီယာနယ်စပ်မှ ထရပ်ကားများဖြင့် သယ်ဆောင်လာခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ဗင်နီဇွဲလားစစ်သားများက ထရပ်ကားများအား တားဆီးရာ လူအုပ် ကြီးကလက်မခံဘဲ စစ်တပ်၏ သတ်မှတ်မျဉ်းကို ကျော်ဖြတ် မောင်းနှင်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
”စစ်သားတွေက ပစ္စည်းတွေကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်”ဟု အသက် (၃၉)နှစ်အရွယ် ဒေးဗစ်ဟာ နန်ဒက်က ပြောဆိုလိုက်သည်။ ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံအတွက် စား နပ်ရိက္ခာများ၊ ဆေးဝါးများအား အ မေရိကန်ကန်အစိုးရက လူသားချင်း စာနာထောက်ထားသော အကူအညီအဖြစ် ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ဗင်နီဇွဲလား သမ္မတမာဒူရိုက ယင်းထောက်ပံ့ ကူညီမှုများ လက်မခံခဲ့၍ ဗင်နီဇွဲလားနယ်စပ်များတွင် သောင်တင် နေရခြင်းဖြစ်သည်။ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဂွာအီဒိုက ယင်းပစ္စည်းများကို ကိုလံဘီယာနယ်စပ်မှတစ်ဆင့် နိုင်ငံတွင်းကြီးကြပ်ကာသွင်းယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကိုလံဘီယာအစိုးရက ဂွာအီဒိုအား ယခုကဲ့သို့ ကူညီမှုများကြောင့် ဗင်နီဇွဲလားသမ္မတမာဒူရိုက ဒေါသ ဖြစ်ကာ လိုအပ်ပါက ကိုလံဘီယာနိုင်ငံနှင့် သံတမန်အဆက်အသွယ် ဖြတ်တောက်မည်ဟု ကြုံးဝါးပြောဆိုခဲ့သည်။ ဘိုဂိုတာမြို့ရှိ ဗင်နီဇွဲလား သံရုံးဝန်ထမ်းများကိုလည်း ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာလာစေရန် ညွှန် ကြားလိုက်သည်။ ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံသည် ကိုလံဘီယာနိုင်ငံနှင့် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်မှ စတင်၍ သံတမန်အဆက် အသွယ် ဖြတ်တောက်လိုက်သည်ဟု CNN နောက်ဆုံးသတင်းအရ သိရှိရသည်။
ဥရောပသမဂ္ဂဝင် မဟုတ်သော နိုင်ငံများသို့ ဂျာမနီ၏ လက်နက်ရောင်းချရေး စည်းမျဉ်းအချို့ ပြင်ဆင် သ
အမေရိကန်သည် ဗင်နီဇွဲလားပဋိပက္ခကို ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နေဟု မာဒူရိုပြောကြား
အစားအစာ လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ စီးပွားရေး ရှုထောင့်ကသာ အကြည့်မျာြး